Akhri 10 su’aalood oo Farmaajo ugu Diyaarsan Mareykanka oo uu dhawaan safar ku tegayo | Baligubadlemedia.com
Akhri 10 su’aalood oo Farmaajo ugu Diyaarsan Mareykanka oo uu dhawaan safar ku tegayo
September 19, 2019 - Written by admin
Mudane Madaxweyne, waxaad haysatay dhalashada iyo muwaadinimada mareykanka ilaa xagaagi dhaweyd markii aad si ikhtiyaar leh uga noqotay ma soo xareysay dhakhli intii aad ahayd muwaadinka mareykan ah?
Xataa muwaadinka mareykanku marka uu dibeda ku nool yahay iyada oo aanay qasab ku ahayn waa in uu war bixin ka keeno dakhliga soo galay
Hantidaadu nasiib wadaag waxay u korodhay si xawli ah ilaa iyo intii aad noqotay Madxweynaha Soomaaliya bishii 2aad feb. 2017 Miyaad sii deyn doonta xogaha si aad u tusto ilaha dhaqaalahan hantidaada? Hadii aanad buuxin waajibaadkaaga xareynta sababta aanay u dhicin? Marka aad ka degto Madaxweynaha Soomaaliya oo aanad haysan xasaanad diblomaasiyadeed, miyaad dib cagaha u soo dhigi mareykanka? Ma waxaad la kulmi doonta eedaymo musuq maasuq cashuureed xiligii aad ahayd muwaadinka mareykanka ah
Musuq Maasuq ( Corruption)
Mudane Madaxweyne Soomaaliya waxay heshaa balaayiin doolar oo kor kaca sannad walba caawimo ahaan hadana Ha’yada Daahfuraanta aduunku waxay sheegtay in Soomaaliya tahay dalka ugu musuq maasuqa badan dunida muddo 10 sanno ah xataa waxay ka musuq maasuq badan tahay dalalka Siiriya, Ciraaq , faransiweela ,Yaman iyo afgaanistaan. ” laaluush , xadista lacagta dadweynuhu iyo ka fa’iideysiga masuuliyadu waa xaqiiqo dhab ah oo ka jirta nolosha Soomaaliya, waa wax la helay oo jirta
Miyaad Aaminsan tahay in qiimeynta ha’yadda daahfurnaantu khalad tahay? Hadii jawaabtu Haa tahay sababtee ayey u khaldan tahay? Hadii xogta Ha’yadda Daahfurnaanta sax yahay si kastaba ha noqotee ishaaradaasi waxay ku tusaysaa in dawlada federaalka Soomaaliya la’ dahay awood ay ku maamusho deeqihii lagu caawinayey? Maxay muwaadiniinta Mareykanka ee cashuurta bixiya ugu diriyaan Taageero Malaayiinta Marka intii ugu badneyd hantida la khasaarinayo inta ugu badanna masuq maasuq lagu cunayo?
Secuirity ( Amaanka)
Mudane Madaxweyne waxay u muuqata inta ugu badan argagixisada Alshabaabku ay weeraro ka fuliyaan wadanaha magaalooyinka Muqdisho , Kismaanyo iyo meelaha kale ee loo maleynayo in ay Amaan yihiin marka sal looga dhigo bilkasta wuxuu u muuqdaa in dhibaatadu ka sii dareyso
Maxay u dhacdey sidani? Mana tusi karta meel keliya oo aad horumar ka sameysay?
Dawlada Soomaaliya ma Awoodda in ay joogteyso amaankeeda ka dib markii midowga afrika ay hoos u dhacdey himiladeedi helada nabbada?
sidaad u qiimeyn laheyd muuqaalada dhawaanahan soo ifbaxaya taasoo muujineysa in somalia ay ka raadineyso cafis Al-shabaab ama dhaarasho kooxda ah?
Waxaa jirey warbixino badan oo Alshabaabku qasbayeen in shaqaalaha dhisaya muqsisho stadium ay joojiyaan dawladaadu wey diiday inkasta oo ay jiraan caddeymo ku lid ah
miyaad sharaxaysaa ku guuldaraysiga mashaariic badan oo la doonayo in la dhammaystiro si aan qarsoodi ahayn masuq maasuq iyo karti darro awgeed?
Human right. ( Xaquuqul insaan)
Mudane Madaxweyne ma awoodda in aad ka hadashid awoodaha iyo daciifnimada dastuurka Soomaaliya? ilaa iyo markii aad timi awoodda waxaa la dilay dad badan mucaarad firfircoon ah iyo kuwo badan oo la xidhey waxaa la diley muwaadiniin mudahaadayey iyaga oo aan hubaysneyn
Waxaa hoos u dhacdey saxaafada Madaxa bannaan daawashadaada, maaha keliya cadaadiskaaga xukuumada laakiin sidoo kale maxaa yeelay sababta oo ah ikhtiyaar iskaashi dhaqaale.
Waa maxay ahmiyad siintaada xaquuqul insaaniyeed? Ma qeexi kartaa qorshaha wax loogu qabanayo dhibaatooyin badan oo ku soo baxay xukunkaaga dartii?
Travel. ( Socdaalka)
Mudane Madaxweyne markii aad ololaha ugu jirtey kursiga Madaxweynenimada waxaad saadaal ku cambaareyn jirtey ku noqnoqoshada safarrada dibbeda intaas oo dhan ka dib waxaa taalla Soomaaliya shaqo badan u baahan in wax laga qabto Madaxweynahana waxaa looga baahan yahay gurigiisa xafiiskaagana waxaad ka safartey in ka badan inta ay Madaxda shisheeyuhu ka safraan dalalkooda.
Sannadkii ina soo dhaafey tusaale ahaan waxaad booqatay itoobiya ugu yaraan saddex jeer, talyaaniga , imaaraatka , gadar , Burundi , eleteeriya , jabaan iyo Turki
Safaradan weliba ku jiraan kuwa Raysalwaaraha iyo kuwa Wasiirka Arimaha dibbedu Madaxweyne Ma noo sheegi kartaa inta kharash ku baxa safaradan?
Miyaad tilmaami kartaa safar kasta oo uusan qaban karin wasiirka arrimaha dibadda bedelkii?
Dhinac ahaan: Booqashadan hada, waxaad asal ahaan qorsheyneysay booqashooyinka inaad ku aragto jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota iyo Ohio, laakiin waad baajisay ka dib markii aad ogaatey banaanbaxyo qorsheysan. Maxaad u dhagaysan la’dahay waxyaabaha mudaaharaadayaasha tooska ah oo, hadaad aaminsantahay inay wax u dahsoonyihiin, uga doodi weyday dood madaxbanaan?
Mudane Madaxweyne, maamulkaagu wuxuu ku dhaqaaqay siyaasada arrimaha dibedda ee Soomaaliya iskaashi dhow oo dhexmara Turkiga iyo Qatar. Dhawaan waxaad u dalacsiisay Fahad Yaasiin, oo hore u ahaa Al Jazeera, inuu noqdo madaxa sirdoonka Soomaaliya, inkasta oo uu ahaa kuxigeenka agaasimaha sirdoonka, waxaa lagu soo waramayaa inuu ku faanay inuu yahay boorsada Qadar iyo sameeyaha iyo jabinta burburka siyaasadeed ee Soomaaliya.
Ma jiraan wax run ah sheegashada Fahad Yaasiin? Mise eedeymaha ah in Yaasiin uu haysto baasabooro badan? Maxaad u aragtaa inay yihiin himilooyinka Qatar ee Soomaaliya? Ma ku xisaabtami kartaa dhammaan gargaarka Qatar? Dhammaantiin miyaa lagu toosiyaa adiga, mise mas’uuliyiinta kale ee Soomaalida ah ayaa si toos ah lacagta Qatar uga helaan? Iftiin cusub ma ku bixin kartaa wicitaanada teleefoonka ee lala xiriiriyo ee muujinaya jihada Qatar ee weerarada argagixiso ee gudaha Soomaaliya gudaheeda?
Waxaad xidhiidh adag la sameysay Turkiga, xitaa waxaad siisay Turkiga saldhig millatari oo ku yaal Muqdisho. Saraakiisha Turkiga, si kastaba ha noqotee, waxay caddeeyeen inuu jiro xadidnaan la siiyo oo ku aadan gaarsiinta Turkiga ee Afrika. “Waa inaan ka caawino sidii ay u horumarin lahaayeen nidaamkooda waxbarida ee wadaadada muslimiinta ah ee aan u adeegi doonin oo keliya dadka laakiin sidoo kale dadka ku bari doona diinta Islaamka saxda ah qaabkeeda ugu wanaagsan,” ayuu yiri mid ka mid ah saxafiyiinta maxkamadda Recep Tayyip Erdoğan.
Ma raacsan tahay? Erdoğan wuxuu ku dhowaa Islaamka isagoo adeegsanaya muraayadda Ikhwaanul Muslimiinka. Gudaha Soomaaliya xataa gudaheeda, si kastaba ha ahaatee, dhaqan ahaan Islaamku wuxuu ka kooban yahay tafsiir aad u kala duwan. Miyaad ku raacsan tahay boqortooyo diimeedka Turkiga? Dhanka saldhiga, ma sharixi kartaa jiritaanka SADAT, oo ah ciidan Islaami ah oo si joogto ah u tababaran una tababaran islaamiyiinta iyo kooxaha kacdoonka? Immisa lacag ah ayaa Turkiga loo qaybiyaa iyadoo aan la helin xisaab hubin Soomaaliyeed?
Ingriiska Somaliland waxay xornimadeeda qaadatay 1960-kii, laakiin kadib waxay si iskeed ah ula midowday Talyaani reer Somaliland ah si ay u dhisaan Soomaaliya. Sannadkii 1991, ka dib markii ay wajahaysay xasuuqii ay u geysteen xukunkii kaligii taliyihii Siyaad Barre, Somaliland waxay dib ula soo noqotay madax banaanideeda. Waxay leedahay doorashooyin madaxweyne oo soo noqnoqonaya, ciidan gaar ah oo ammaan ah, lacagtiisa gaarka ah iyo, si ka duwan sida Soomaaliya u habboon tahay, waxay leedahay ammaan.
Mudane, hoggaankaagu, Soomaaliya waxay sii kordhineysay iskudayada ay ku qasbeyso Somaliland inay ku qasabto inay dib-u-hoosgeyso Muqdisho, oo raadineysa joojinta gargaarka caalamiga ah ee ay siiso Somaliland, dhammaadka maamulka Somaliland ee hawadeeda, iyo dib-u-soo-celinta maamulka Muqdisho. Marka la eego dhammaan dhibaatooyinka ay Soomaaliya la kulanto, hase yeeshe, ma tahay in dagaal siyaasadeed ama milateri lala yeesho Somaliland runtii mudnaantaada?
Hassan Ali Khayre. ( reysalwasaaraha)
Mudane Madaxweyne, ra’iisul wasaare Khayre wuxuu booqday Washington, DC wax ka yar lix bilood ka hor. Intooda badan booqashadiisa waxay u muuqataa inay ku mashquulsan yihiin meelayntiisa si ay kuugu beddelaan. Ilaa heerkee ayuu ku tartamayaa booska u dhexeeya adiga iyo isaga oo saamaynaya dib-u-dhiska? Haddii uu Khayre madaxweyne noqdo, miyaad dareemaysaa nabadgelyo inaad ku sii nagaato Soomaaliya? Haddaysan ahayn sidaas, tani muxuu ka yidhi qaanuunka-sharciga gudaha Soomaaliya? Miyaad ku qanacday wakiilnimada Khaire iyo golihiisa wasiirada?
Oil. ( Saliida ama Shidaal)
Mudane Madaxweyne, waxaa si weyn loo rumeysan yahay inay saliid weyn ka jirto biyaha Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya waxay u qaadatay khilaafkeedii badda maxkamada caalamiga ee cadaaladda. Khubaro badan ayaa rumeysan in xukunku uu ku dhacayo rabitaanka Soomaaliya, in kasta oo jiritaanka garsoore Soomaaliyeed oo aan isagu iscasilayn wuxuu siin karaa mas’uuliyiinta Kenya hab ay ku murmaan.
Miyaad ka bixin kartaa faahfaahinta xaraashka loogu talagalay sahaminta batroolka iyo gaaska ee lagu muransan yahay biyaha la isku haysto? Maxaad u sugi weyday xukunka maxkamadda? Haddii saliida la helo, farsamooyin noocee ah oo aad qorsheysay inaad hubiso inuusan sii hurineynin khilaaf kale oo ka dhex dhaca Soomaaliya ama lagu geysto akoonnada bangi ee dibadda?
Si kooban, Mudane Madaxweyne, ku soo dhowow Mareykanka. Waxaad heysataa shaqo adag oo aad u adag, laakiin taasi micnaheedu maahan inay tahay mid maran jeegaaga. Miyaad u xaqiijin kartaa Koongareeska iyo dadweynaha guud ahaanba in Soomaaliya ay ku fiicantahay hoggaankaaga isla markaana ujeedkeedu weli yahay mid wanaagsan
Gargaarka miyay waxyeello ka badan tii hore ka wanaagsan tahay? Mise Soomaaliya waxaa loo qorsheynayaa toban sano oo kale ama in kabadan oo dowladdii oo aan dhicin?
In kabadan labo sano oo maamulkaaga ka mid ah, su’aalaha kor ku xusan wali jawaabtooda lama helin. Booqashadaada Qaramada Midoobay iyo Washington, D.C., waxay ku siineysaa fursad aad wax kaga qabato, oo run ahaantii, dadaalka saxda ah ayaa u baahan inaad sidaas sameyso.
Waxaa Turjumay Cabdishakuur Faarax -Qaraami
Waxaa qorey Micheal Rubin Washington Examiner’s beltway Confidential blog